कृषि र पशुपालनमा तुलसीपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / कृषि र पशुपालनमा तुलसीपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं
कृषि र पशुपालनमा तुलसीपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता July 18, 2018	0 188 Views
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको वर्ष दिन पूरा भइसके को छ । सिंहदरवार गाउमै आएको महसुस गराउने जनप्रतिनिधिहरुले गरे को प्रतिबद्धता र एक वषेर् कार्यकालको प्रगतिका विषयमा युगबो धकर्मी ओ पे न्द्र बस्ने तले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे सग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
तपाइ आएको एक वर्ष भयो  । यसबीचमा के –के कामहरु भए ?
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा जनताको मत र मन जिते र हामी प्रवे श गरे को एक वर्ष बितिसके को छ । यसबीचमा के ही नया“ र नमूनायो ग्य कामहरु भएका छन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो  । २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको स् थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनासाथ जनताका अपे क्षाहरु पक्कै पनि एकाएक उकालो लागे का छन् । जनतामा निहीत विकासप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्नका लागि हामीले यो एक वर्षका बीचमा के ही नया“ र जनमुखी खालका कामहरु गरे का छौ ं ।
समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस् थाको पक्षपो षण गर्दै हामीले हरे क क्षे त्रमा रहे र काम गरिरहे का छौ ं । गरिब तथा विपन्नका लागि टिनको छानो वितरण, सुत्के री भत्ता वितरणजस् ता कार्यक्रम हामीले ल्याएका नितान्त नौ ला र जनमुखी कार्यक्रमहरु थिए । यो स“गै जनताका आधारभूत कुरा शिक्षा र स् वास् थ्य क्षे त्रमा पनि हामीले यो वर्ष के ही नया“ काम गरे का छौ ं । सामुदायिक विद्यालयको शै क्षिक गुणस् तर बृद्धि र नियमनको कामलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौ ं । विभिन्न ठाउ“मा स् वास् थ्य क्लिनिक र प्रवद्र्धन के न्द्र स्थापना गरे का छौ ं । यो स“गै तुलसीपुर वृहत् चक्रपथ यो जना निर्माणको काम पनि शुरुवात भएको छ । सडक निर्माणस“गै कृषि क्षे त्रमा पनि हामीले के ही नया काम गरे का छौ ं । जनताका अपे क्षाहरु पूरा गर्न हामीले गरे को काम नै पर्याप्त छै न भन्ने हामीलाई अनुभूत भएको छ । वसपार्क र अटो भिले ज निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा आइपुगे को छ ।
काम गर्दा के कस्ता अवरो ध र चुनौ ती खे प्नुप¥यो ?
संघीय गणतन्त्रात्मक ने पालको पहिलो जनप्रतिनिधि भएकाले हामीलाई काम गर्न अवश्य पनि के ही जटिलताहरु रहे का छन् । मुख्यतः कानून नै निर्माणको क्रममा रहे काले खुला मनले काम गनेर् अवस् था रहे न । कतै अदालतमा धाउनुपनेर् त हो इन भन्दै काम गर्नुपनेर् अवस् था रह्यो  । यो स“गै लामो समयदे खि स् थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको कारणले गर्दा जनताका आकांक्षाहरु पनि एकाएक बढे र गए । जसलाई सम्बो धन गर्नु पनि हाम्रा लागि चुनौ तीको विषय बन्यो  ।
तपाइले निर्वाचनका समयमा जनतासामु गरे का प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने सो च बनाउनुभएको छ ?
निर्वाचनको समयमा हामीले जनतासामु विभिन्न प्रतिबद्धता गरे का थियांै  । सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो  ।
म यस कुरामा निकै सजग पनि रहे को छु । गत आर्थिक वर्षमा हामीले गरे का कामहरु हे र्नुभयो भने हामी चुनावी प्रतिबद्धतामा अडिग रहे को छनक पाउनुहुन्छ । हामीले निर्वाचनको समयमा सुत्के री भत्ता बढाउने कुरा गरे का थियौ ं । त्यो पूरा ग¥यौ ं । खरको छानो हटाउ“छु भन्यांै त्यो पनि पूरा भयो  । यस् ता धे रै कुराहरु हामीले गरिरहे का छांै  । जनताका बीचमा गरे का प्रतिबद्धतालाई हामीले आगामी चार वर्षसम्म मूलमन्त्र बनाएर काम गनेर् छांै  । हाम्रो कार्यकाल सकिदासम्म जनताले हाम्रा सबै प्रतिबद्धता पूरा भएको पाउनुहुने छ ।
हल्ला धे रै गर्नुभयो, काम भएन भन्छन् नि ?
हामीले गरे का काम नै नमूनायो ग्य रहे का छन् । स्थानीय तहमा नया खालको कामको सूत्रपात गनेर् स् थानीय तहका रुपमा हामी रहे का छौ ं । अब खरको छानो हटाउने कार्यक्रम हामीले शुरुवात गरे पछि सरकारले यसै वर्षबाट आरम्भ गनेर् भएको छ । हामी जनताको मनमा छिटो छुने खालका कार्यक्रम गनेर् कुरामा ध्यान दिने गर्दछौ ं । यसले गर्दा पनि के ही चर्चा भएको हुन सक्छ । विकास भन्ने कुरा चरणगतरुपमा हुन्छ । कतिपय वहुवर्षीय यो जनाहरु निर्माणका क्रममा रहे काले पनि काम नदे खिएको हुनसक्छ । तर हामीले काम भने निरन्तर गरिरहे का छौ ं । आधुनिक वसपार्क निर्माणको क्रममा रहको छ । अटो भिले ज निर्माण अन्तिम चरणमा रहे को छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सबै वडाबाट एकीकृत सम्पत्ति कर बुझिन थाले को छ । तुलसीपुर बजार व्यवस् थापनका लागि पनि यो वर्ष के ही काम भएको छ । यस् ता धे रै काम भएका छन् । हामीसग जनताका अपे क्षा धे रै छन् । यसकारण पनि हामीले गरे का कामहरु नदे खिएका हो लान् । तर हाम्रो कामको गति सधै उस् तै तीब्र छ ।
बीचमा रो किदै र सूचारु हुदै आएको तुलसीपुर टरिगाउ“विमानस्थल रो कियो किन ? दीर्घकालीन रुपमा सुचारु हुन नसक्नुका खास कारण के छन् ?
टरिगाउ विमानस्थल सञ्चालनलाई हामीले चुनावी प्रतिबद्धतामा समे त राखे का थियौ ं । विमानस् थल सञ्चालनका लागि हामीले गनेर् भने को पहल मात्रै हो  । के ही पहल गरे र सञ्चालन पनि गरियो  । तर इन्धन डिपो स् थापना गर्न नसक्दा नियमित सञ्चालनमा समस् या आयो  । के ही समय अगाडि विमान कम्पनीले अचानक भाडा बढाएर बन्द ग¥यो  । तर यो पूर्णरुपमा बन्द भएको हो इन । हामीले दीर्घकालीनरुपमा सञ्चालन हो स् भन्ने सो चका साथ अहिले काम गरिरहे का छांै  । सरकारले निर्माण गनेर् भने को वै कल्पिक विमानस् थलका रुपमा यही विमानस् थललाई विकसित गरिने छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहे को छ । विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण इन्धन डिपो नै हो  । यसका साथै अलि ठूला प्रकृतिका जहाज बसाल्नका लागि धावनमार्ग बढाउनुपनेर् दे खिन्छ । यसबारे मा हामीस“गै यस क्षे त्रका के न्द्रमा रहने ने ताहरुले पनि विशे ष पहल गर्नुपनेर् दे खिन्छ । विमानस् थल नियमित सञ्चालन हुने कुरामा हामी निकै आशावादी छौ ं ।
खरको छानो हटाएर टिन लगाउने अभियान कहा सम्म पुुग्यो ?
गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरे र ल्याइएको खरको छानो विस् थापन गनेर् कार्यक्रमको पहिलो चरण सकिएको छ । यस चरणमा हामीले करिब पा“च सय घरमा टिनका छाना लगाउन सफल भएका छौ ं । आर्थिक अभावका कारण असुरक्षित तवरले वस् न बाध्य जनतालाई लक्षित गरे र ल्याइएको यस कार्यक्रमलाई हामीले यो आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएका छौ ं । खुशीको कुरा के छ भने सरकारले यो कार्यक्रमलाई यस वर्षबाट के न्द्रीय बजे टमा पनि राखे को छ । यो हाम्रा लागि निकै उत्साहको कुरा हो  । यो वर्ष हामीले करिब एक हजारजति घरमा टिनको छानो लगाउने सो च बनाएका छांै  ।
शिक्षा र स् वास् थ्यले बजे टमा कत्तिको स् थान पाएका छन् ?
शिक्षा र स् वास् थ्य विकासका आधारभूत कुराहरु हुन् । अन्य विकास जतिसुकै गरे पनि शिक्षा र स् वास् थ्यको विकास हुन सके न भने वास् तविक विकासको अर्थ रह“दै न । यसपटक हामीले शिक्षा र स् वास् थ्यलाई कृषि र पूर्वाधार विकासपछि पहिलो प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रे जी माध्यमबाट अध्यापन गराउनुका साथै समग्र शिक्षाको गुणात्मकता बृद्धिका लागि विभिन्न नयँ“ खालका कार्यक्रमहरुको यो वर्षबाट सूत्रपात गनेर् छौ ं । यसका साथै स् वास् थ्यको विकासका लागि यहा रहे को अञ्चल अस् पतालको स् तरो न्नतिका साथै स् वास् थ्य के न्द्र र नगर स्वास्थ्य प्रबद्र्धन के न्द्र स् थापनामा जो ड दिइने छ । हरे क वडामा एम्बुले न्सका साथै स् वस् थ जनता स् वस् थ उपमहानगर भन्ने नारालाई मूर्तरुप दिनका लागि विभिन्न स्वास्थ्यका बारे मा यो जनाहरु निर्माण गरे र कार्यान्वयन गनेर् छौ ं ।
तुलसीपुर बसपार्कलाई व्यवस् िथत गनेर् काम कहा सम्म पुग्यो ?
अहिले करीब ७० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । बसपार्कलाई आधुनिक बनाउनका लागि नया तरीकाले काम भइरहे को छ । बसपार्कमा रहे को अटो भिले ज अब के ही समयमै नया ठाउ मा जाने छ । त्यसपछि बसपार्कले नया स्वरुप लिने छ । व्यावसायिक टहराहरु निर्माण भइसके का छन्, सडक कालो पत्रे हु दै छ । अब मुख्य भवनको कुरा हो , त्यो पनि तीब्ररुपमा काम अगाडि बढिरहे को छ । के ही समयमै यहा“ले आधुनिक स् वरुप दे ख्नुहुने छ ।
यो आर्थिक वर्षका नया कार्यक्रमहरु के –के छन् ?
यो वर्षलाई हामीले कृषि वर्षका रुपमा घो षणा गरे र काम गनेर् छौ ं । यसको शुरुवात निःशुल्क विरुवा वितरण गरे र भइ पनि सके को छ । कृषि र पशुपालनमा तुलसीपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा हामी लागिरहे का छौ ं । यसका साथै भौ तिक पूर्वाधार निर्माण विकासको आधार भएकाले भौ तिक पूर्वाधार निर्माण पनि हाम्रो प्राथमिकता क्षे त्रभित्र रहे को छ । विभिन्न क्षे त्रमा जनताले अपे क्षा गरे अनुरुपका कार्यक्रम नै हामीले यो वर्षबाट आरम्भ गरे का छौ ं ।
Previous: विकास खर्चको परिपाटी बदल
Next: मैत्रीपूर्ण फूटवलमा तुलसीपुर पत्रकार समूह विजयी